::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather महिलाको झोला कति फोहोर ?:: Rojgar Manch ::
बुधवार, २०७० आश्विन ०१ गते ०९:३९
प्रायः युवतीहरु चिटिक्क परेर, चिटिक्कको ह्याण्डब्याग समातेर हिँड्छन् । तर उनीहरुले समातेको त्यो झोला कति धेरै फोहोर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउने हो भने आङै जिरिंग हुन्छ । महिलाको त्यो हाते झोलामा विभिन्न खाले हानिकारक जिवाणु, विषाक्त व्याक्टेरियाका साथै केही मलमुत्र समेत रहेको हुन्छ भन्ने सुन्दा के तपाइँलाई पत्यार लाग्यो ? नपत्याए नपत्याउनुस् तर सत्य यहीँ हो ।
बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनले महिलाको ह्याण्डब्यागको पिँधमा कस्ता कस्ता हानिकारक ब्याक्टेरिया र फोहोर पदार्थ हुँदोरहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाएको छ । ह्याण्डब्यागको पिँधमा जमेको फोहोरको परीक्षण गर्दा त्यसमा हानिकारक इ कोली जिवाणुका साथै विभिन्न खाले विषाक्त ब्याक्टेरिया र मलमुत्रको अंश समेत पाइयो । महिलाको झोलामा पाइएको अर्को जिवाणु भनेको फिकल स्ट्रेप्टोकोकस हो । यो जिवाणुले मानिसमा मेनेन्जाइटिस गराउँछ । त्यस्तै मानिसमा इन्फेक्सन गराउने स्युडोमोनास जिवाणु पनि महिलाको झोलामा पाइयो ।
शोधकर्ताहरुका अनुसार आफ्नो जिउ सफा गरेपनि झोला कहिल्यैपनि सफा नगर्ने बानीका कारण महिलाको झोला ब्याक्टेरियाको घर बनेको हो । अध्ययनका क्रममा एक तिहाइ महिलाले आफुले आफ्नो ह्याण्डब्याग कहिल्यैपनि सफा नगरेको बताए । कतिपय महिलाले त आफुले आफ्नो हाते झोलामा फोहोर जुत्ता, फोहोर पेन्टी तथा भिजेको प्याड बोक्ने गरेको बताएका थिए । कतिपयले त आफुले चपाएर फ्याँकेको चुइंगम झोलामै अडि्कने गरेको बताए ।